जेलबाटै आलमको आतंक : बम विस्फोटका साक्षीले सुरक्षा पाएनन्, बयान फेर्न बाध्य | Hindu Khabar
काठमाडौ । रौतहटको फरहदवामा जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम अहिले पुर्पक्षका लागि काठमाडौंको नख्खु जेलमा छन् । तर, पैसा र प्रभावले जिल्लामा उनको आतंक र त्रास अहिले पनि उस्तै छ । आफूविरुद्ध जाहेरी दिने र सरकारी साक्षी बस्नेहरूलाई आलमले डर, त्रास र आर्थिक प्रलोभन देखाएर प्रभावित गरिरहेका छन् ।
बम बनाउने कालिगढको घटनास्थलमै ज्यान गयो, नजिकै रहेका पिन्टु र ओसी घाइते भए । उपचार गर्दा घटना सार्वजनिक हुने डरले उनीहरूलाई इन्जेक्सन दिएर बेहोस बनाइयो र ट्र्याक्टरमा हालेर इँटाभट्टामा पुर्‍याइयो । जहाँ उनीहरूलाई अन्य मृतकसँगै जिउँदै इँटाभट्टामा कोचेर खरानी बनाइयो । ‘युवाहरूको शरीर जिउँदै भट्टामा नछिरेपछि नजिकै दाउरा चिर्ने ठाउँबाट बन्चरो ल्याएर शरीर गिँडिएको थियो,’ परिवारका सदस्यहरूले त्यतिखेर प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
सोही घटनामा बमका छर्रा लागेर सफी अहमद पनि घाइते भएका थिए । तर, उनी उपचार पाएर बाँच्न सफल भए । किनभने उनी आलमका टाढाका आफन्त पनि हुन् । त्यतिवेला उनी आलमकै लागि काम गर्थे । खुट्टा, पेट र छातीमा छर्रा लागेर गम्भीर घाइते भएका सफीलाई आलमकै सहयोगमा तत्काल भारतको पटनास्थित अस्पताल पु¥याएर उपचार गरिएको थियो ।
‘२७ चैत ०६४ (विस्फोट हुँदा)मा म भारतको पन्जाबमा काम गर्न गएको थिएँ । त्यहाँ रहँदा मैले खेती किसानको काम गर्थेँ । मैले गाई, भैँसीलाई भुसा र घाँस खुवाउने काम पनि गर्थेँ,’ सफी अहमदले गरेको बकपत्रमा उल्लेख छ । खुट्टामा भएको खाटालाई भने उनले कोदालो चलाउँदा लागेको चोटको दाग बताएका छन् । मुख्य अभियुक्त अफताब आलम, उनका भाइ महताबलगायतलाई नचिनेको बयान उनले दिएका छन् । सफीको जिल्ला अदालतमा तीन दिनसम्म बयान चलेको थियो ।
जब कि, सोफी अहमदले यसअघि ०७६ असोजमा प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा भने २७ चैत ०६४ को साँझ राजपुरस्थित शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको र आफू त्यही विस्फोटमा परी घाइते भएको उल्लेख गरेका थिए । अदालतमा बकपत्र गर्दा भने उनले प्रहरीले जबर्जस्ती उजुरीमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘घर आएको वेला मलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चन्द्रनिगाहपुर लगेर गए । त्यहाँ थुनामा राखे, कुटपिट गरे । उनीहरूले नै झुटा कागजात बनाए । मलाई जबर्जस्ती गरेर सोही कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । त्यसैले मैले दिएको जाहेरी सही होइन ।’
‘प्रहरीसँगै थिए म समसुल हुँ भन्ने व्यक्ति । उसैले पेस्तोल देखाएर डर–धम्की दिए । जबर्जस्ती कागज गर्न लगाए । रूपेश साह भन्ने प्रहरी इन्स्पेक्टर पनि सँगै थिए । उनीसँग त्यहीँ भेट भएको हो । अरूसँग भने चिनजान छैन,’ बकपत्रमा उल्लेख छ ।
पक्राउ परेपछि आलमले जाहेरी दिने सफी अहमद र श्रीनारायण सिंह तथा सरकारी साक्षी बनेका समसुल मियाँ र उनकी छोरी अमना खातुनलाई प्रभावमा पार्न सुरु गरेका थिए । श्रीनारायणबाहेक तीनैजना प्रभावमा परिसकेका छन् । यो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार आलमकै दबाब र प्रभावमा परेर तीनजनाले बयान फेरेका हुन् ।
आलमविरुद्धको मुद्दाका सरकारी साक्षी एकजनालाई अदालतले अंगरक्षक दिने भने पनि अहिलेसम्म दिएको छैन । अर्का एकजनालाई दिइएको अंगरक्षक पनि झिकिएको छ ।
सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गएका थिए । तर, अंगरक्षक खटाउने निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘मलाई थ्रेट छ, तर अंगरक्षक छैन । जब कि त्यसको व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतले गत वर्ष नै निर्णय गरेको हो,’ काठमाडौंमा भेटिएका साहले भने ।
साहले डरका कारण काठमाडौं आएको बताए । ‘डरले काठमाडौंमै बस्छु । बयानका लागि रौतहट जान्छु । फर्केर फेरि चन्द्रनिगाहपुर आउँछु । घर गौरमै छ । म त्यहाँ बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पीडितको पक्षकाे बहस गर्ने अधिवक्तालाई धम्की
‘मिति ०७५ पुस ८ गतेका दिन प्रतिवादी मोहम्मद अफताब आलमका भाइ भन्ने डा. साब सम्बोधित र कान्छा छोरासमेतले मुद्दा हेरेको विषयमा अब सरकार चेन्ज भइहाल्छ, सरकारको अन्डर सुरक्षामा कति दिन बस्न सक्नुहुन्छ ? कसैको जीवन बर्बाद पार्ने गरी लाग्नुहुन्छ भने उसले पनि किन छाड्छ ? हामीले पनि छाड्ने कुरा हुँदैन,’ पौडेलले प्रशासनमा दिएको निवेदनमा भनेका छन्, ‘तपाईं किन यसरी पछि लाग्नुहुन्छ ? तपाईं सधैँ सुरक्षाघेरामा रहन सक्नुहुन्छ ? भनी मेरो जिउज्यान र पेसामा समेत दागा धरी धम्की दिएको हुँदा म निवेदक मुद्दाको सिलसिलामा पटकपटक रौतहट–गौर आउने–जाने गर्नुुपर्ने भएकाले जिउज्यानको सुरक्षा गरिपाऊँ भनी यो निवेदन पेस गरेको छु ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ ।